Autodesk wuxuu soo bandhigayaa "Qolka Weyn" ee Xirfadlayaasha Dhismaha
Xalinta Dhismaha Autodesk ayaa dhawaan ku dhawaaqay daahfurka The Big Room, oo ah jaaliyad khadka tooska ah u saamaxaysa xirfadlayaasha dhismaha inay xiriir la yeeshaan dadka kale ee warshadaha isla markaana ay si toos ah ula xiriiraan kooxda 'Autodesk Construction Cloud team'. Qolka Weyn waa xarun toos ah oo toos ah oo loogu talagalay xirfadleyda ...
Barnaamijka ugu Fiican ee Dhismaha - Abaalmarinta Xisaabinta Dhismaha 2018
Kani waa tartan lagu abaalmariyo dadaalka ugu wanaagsan ee softiweerka ee diiradda lagu saaray dhismaha, injineernimada iyo dhismaha. Liiskan kama dambeysta ah wuxuu inoo sheegayaa sida tartanka u dhexeeya bixiyeyaasha ugu muhiimsan ee xalka xisaabinta ee juqraafi-jabka uu u yahay daabacaaddiisa saddex iyo tobnaad. Waxaan ku calaamadinay midab ka duwan noocyada aan dooranay si loo fududeeyo ...
Wms2Cad waa aalad gaar ah oo lagu keenayo adeegyada WMS IYO TMS sawirka CAD si loo tixraaco. Tan waxaa ka mid ah khariidadaha Google Earth iyo khariidadaha OpenStreet iyo adeegyada muuqaalka. Waa wax fudud, dhakhso leh oo wax ku ool ah. Waxaad kaliya ka dooraneysaa nooca khariidada liiska horay loo sii qeexay ee adeegyada WMS ama qeex mid ka mid ah xiisahaaga, waad awoodaa ...
Plex.Earth download images of Google Earth Waa sharci darro?
Waxaan horay u aragnay barnaamijyada qaar oo sawiro ka soo degsaday Google Earth. Gooreferenced ama maya, qaarkood ma sii jiraan sida StitchMaps iyo GoogleMaps Downloader. Maalin dhaweyd saaxiibkay ayaa i weydiiyay haddii waxa Plex.Earth uu ka sameeyo AutoCAD uu jabiyo siyaasadaha Google iyo in kale. Maxay ereyada Google dhahaan http://earth.google.com/intl/es/license.html (c) la…
Page 1 Page 2 Page 3 ... Page 8 page Next